Youtube အပ်ဒိတ်အသစ်၊ ကြည့်ရှုမှုပုံစံအသစ်များ Androidsis ပါ
Youtube update အသစ်တွင်ကြည့်ရှုခြင်းနည်းလမ်းအသစ်များပါရှိသည်
Alexis Martinez | | Android application များ
အကြီးဆုံးအွန်လိုင်းဗီဒီယို ၀ န်ဆောင်မှုဖြစ်သော YouTube သည်မကြာသေးမီရက်များအတွင်းတိုးပွားလာခဲ့သည်။ ပထမဆုံးအနေဖြင့်လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်က Premium ဝန်ဆောင်မှုကိုကြေငြာခဲ့သည်။ Youtube အနီရောင်စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသောအင်္ဂါရပ်အသစ်များပါ ၀ င်သော ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခု၊ ဒီအသစ်အဆန်းတွေထဲမှာငါတို့တွေ့ရတယ်၊ ကြော်ငြာကိုမစောင့်ဘဲဗွီဒီယိုများကိုဖွင့်ပါ, သူတို့လုပ်နိုင်တယ် ဗွီဒီယိုများသိမ်းဆည်းပါ y သူတို့ကိုအော့ဖ်လိုင်းကစားပါ, နောက်ခံပြန်ဖွင့် y ဂူဂဲလ်ပလေးဂီတကိုအခမဲ့စာရင်းသွင်းပါ.
Premium YouTube ကိုလွှင့်တင်ပြီးနောက်နောက်ကွယ်မှ developer များအဖွဲ့သည် application ၏အတွင်းပိုင်းအမှားများကိုပြုပြင်ရန်နှင့်၎င်း၏ Android application တွင်ထူးဆန်းသောအသစ်အဆန်းကိုထည့်သွင်းရန်လုပ်ဆောင်နေသည်။
အနာဂတ်ဗားရှင်းကိုနံပါတ် ၁၀.၄၃ အရရောက်ရှိလာမည်ဖြစ်ပြီးမည်သည့်တိုးတက်မှုရှိသည်ကိုဖော်ပြခြင်းမရှိသော်လည်း Android Police မှယောက်ျားများသည်လျှောက်ထားမှု၏ .apk တွင်လက်ကမ်းစာစောင်များရရှိခဲ့ပြီးအချို့ကိုရှာဖွေနိုင်ခဲ့သည် ၎င်း၏အနာဂတ်သတင်း။
Android ရဲအဖွဲ့အားအနာဂတ်ရဲ့ YouTube ရဲ့ရဲ့ရဲ့စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုထဲမှာထည့်သွင်းထားခြင်းဖြစ်သည် ခလုတ်အသစ်များ ဗီဒီယိုများတွင်ပြန်လည်လှည့်ခြင်းနှင့်မြန်ဆန်စွာရှေ့သို့ပြေးခြင်းစသည့်ကွဲပြားသောလုပ်ဆောင်ချက်များကိုဆောင်ကြဉ်းပေးသည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, လျှောက်လွှာထည့်သွင်း icon အသစ်များ သေးငယ်ပြီးပိုမိုတောက်ပသောအဖြူရောင်အရောင်အောက်တွင်ရှိသည်။ နောက်ဆုံးထွက်မွမ်းမံမှုများတွင်သင်တွေ့ခဲ့ရသည့်အတိုင်း၊ YouTube application ၏ဒီဇိုင်းသည်လုံးဝဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားပြီးပိုမိုသန့်ရှင်းပြီးနူးညံ့သိမ်မွေ့စေသည်။
အပေါ်ကပုံမှာမင်းရဲ့ထင်ရှားတဲ့ဗီဒီယို ၀ န်ဆောင်မှုရဲ့ထူးခြားတဲ့ပြောင်းလဲမှုအချို့ကိုသင်တွေ့နိုင်သည်။ ယခုအချိန်တွင်မူဤမူကွဲသည်မည်သည့်အချိန်တွင်ရောက်ရှိမည်ကိုအတိအကျမသိရသေးသော်လည်းလာမည့်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်းတွင်၎င်းသည်ရရှိနိုင်ကြောင်းအရာအားလုံးကဖော်ပြသည်။ တဖန်သင်တို့က, လျှောက်လွှာတွင်ပြုလုပ်နေသောအပြောင်းအလဲများကိုသင်မည်သို့ထင်သလဲ ?
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android application များ » Youtube update အသစ်တွင်ကြည့်ရှုခြင်းနည်းလမ်းအသစ်များပါရှိသည်
Kirin 950 ပရိုဆက်ဆာအသစ်ကိုနိုဝင်ဘာ ၅ ရက်တွင်ကြေငြာနိုင်သည်
Bluboo Xtouch သည်တုန်ခါမှုဒဏ်ကိုခံနိုင်သည့်တကယ့်ကိုခံနိုင်ရည်ရှိသောဖုန်းဖြစ်သည်